yekutanga OS 6 Odin ikozvino inowanikwa nemitambo yekubata-yakawanda, pakati pevamwe | Linux Vakapindwa muropa
Makore mazhinji apfuura, panguva iyoyo yakaipa apo Canonical yakaunza kubatana kwayo uye vazhinji vedu takatsvaga dzimwe nzira dzeUbuntu, kumwe kwekugovera kwandakaedza ndiko kwakagadzirwa naDaniel Foré. Ini ndaifarira dhizaini yayo "maquero" uye kuti yaifamba zviri nyore, asi zvimwe zvinhu zvaive zvisingaenzanisike uye ndakaguma ndiri muUbuntu MATE. Ndicho chaive chisarudzo changu. Vamwe vazhinji, kunyangwe pakutanga, vakagara mu "elemental" system iyo maminetsi mashoma apfuura akapa yakanyanya kukosha kugadzirisa: yekutanga OS 6.
Iyo codename yechitanhatu vhezheni yeiyo sisitimu yekushandisa kubva iyo isu takatanga kuziva ruzivo zvishoma pamusoro pegore rapfuura es wevaNorse. Cassidy James Blaede, uyo akaburitsa iyo kusunungura chinyorwa, inovimbisa kuti «yekutanga OS 6 ndiyo inonyanya kugadziridzwa vhezheni kusvika zvino, ichikubvumidza iwe kuti uchinje zvachose mufananidzo wayo«. Ini pachangu, uye semushandisi we KDE, handifunge kuti yakawanda kudaro, asi inosanganisira iwo mwenje uye nerima madingindira uye kunyangwe iyo "yekusimbisa" ruvara.
yekutanga OS 6 ndiyo inonyanya kugadziriswa vhezheni kusvika zvino
Nezve maficha matsva, Blaede akataura:
Iyo yakawanda-inobata. Vashandisi veGNOME makumi mana vakatomboedza maitiro avo vanoziva kunaka kwavo, uye Odin anotibvumidza ku:
Pinda multitasking, ratidza yakavhurwa maapplication uye nzvimbo dzekushandira uine matatu-chigunwe swipe kumusoro. SaGNOME 40, ichaita kuti ikurumidze kana kunonoka zvichienderana nekumhanya kwechiratidzo chedu.
Minwe mitatu kuruboshwe kana kurudyi inotifambisa pakati pesimba nzvimbo dzekushandira, zvakare zvakafanana nezvatinoita muGNOME 40.
Zvinyorwa zviviri-zvemunwe zvakare musystem application, senge zvinotorwa muAppCenter, chiratidzo chezuva kana kuenda pakati pematanho ekutanga kumisikidzwa uye kugashira skrini.
Rova zvakasimba kuramba Notices.
Yakagadziriswa ziviso sisitimu, ine mabhaluni, inotibvumidza isu kuratidza zvakadzama ruzivo uye zviito.
Nyowani Tasks app, uye kubva pane zvakatorwa zvinoita senge zvinoenderana nezviyeuchidzo zveICloud.
Firmware inogadziridza iripo.
Kunatsiridzwa mune yekutanga OS / Pantheon app yakatarwa.
Iyo dashboard ikozvino inoratidza ruzivo kana ichifamba pamusoro payo.
Kubvira kwe stacking windows (mataira).
Zvimwe zvinonzwisisika kupfuura shanduro dzekare, zvichiita kuti zvive nyore kushandisa.
Mapikicha maviri, mwenje mumwe uye rimwe rima, kune iwo theme yatinosarudza.
Izvi zviri pamusoro ndere pfupi pfupi runyorwa. Kuti uone shanduko dzese zvakadzama, zvakakosha kuverenga iyo yekuburitsa noti.
yekutanga OS 6 Odin ikozvino iripo kubva Iyi link. Kana iwe uri mumwe wevashandisi vayo, iyi vhezheni inofarira iwe. Uye kana zvisiri, pamwe zvinokutendisa kuti uchinje kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 6 Odin ikozvino inowanikwa nemitambo yekubata-yakawanda, yakagadziriswa ziviso system uye nezvimwe zvakawanda
Ini ndinofunga semunyori, chepuraimari haasati apedza kundigutsa, kune rangu divi ini ndinoramba ndichienderera mu linux mint, mune yangu inozvininipisa uye yekutanga pfungwa iyo yakanakisa muyero pakati pekureruka, kugadzirisa uye sarudzo.
Pamusoro pekuti iwo maapplication azvino uno akagadzirwa nemindi akaita kunge anokosha kwandiri, pamwe nyaya yekushongedza ndiyo poindi isina kusimba, inotanga kutaridzika sechinyakare, kana tikachienzanisa nemamwe madhesiki emazuva ano, kunyangwe hachisi chinhu chakakosha, ndinofunga zvingave zvinonakidza kutanga nekusimudza kumeso, zvirinani kuti vachazvipa kune rako peji ...
Zvisinei, iwe unofanirwa kupa yekutanga 6 mukana, unoratidzika kunge wakanaka, asi kunyangwe ukasauya kumusoro wenyaya ... zvinotaridzika zvakanyanya kuvimbisa kuti zorin itsva os 16 ichabuda mumazuva mashoma, kunyanya pro chinyorwa, kunyangwe chikabhadharwa… maererano
Google One VPN ikozvino yave kuwanikwa, zvakare kuSpain, asi kwete kune wese munhu